Nagu saabsan - Shaoxing Sich Cosmetics Packaging Co., Ltd.
SHAOXING SICH COSMETICS xirxirida XADDIDAN [Yuyao Langrun Warshad caag ah] waa soo saaraha xirfadle ah ee wax soo saarka xirxirida caag ee Shiinaha, oo ku yaal magaalada Yuyao. Shirkaddayadu waxay gebi ahaanba daboolaysaa qiyaastii 1,000 mitir murabac. waxaan nahay warshad xirfadeed si aan u soo saarno dhalooyinka dhaldhalaalka ah iyo weelasha qurxinta oo leh waayo-aragnimo buuxda. waxaan haysannaa boqolaal macaamiil ah oo dal iyo dibadba leh.Waxaan bixin karnaa astaanta naqshadeynta iyo caaryada adeegga caaryada.
In ka badan 10 sano oo soosaarid iyo khibrad naqshadeyn isku dhafan, waxaan ku guuleysanay inaan macaamiisheenna siino xalka baakadaha saxda ah ee hubiya ilaalinta iyo sare u qaadista booska astaanta suuqa.
Waxaan leenahay naqshadeynta gudaha iyo sameynta koox, mashiinka qurxinta midabka otomatiga ah, daabacaadda shaashadda xariirta iyo mashiinka kuleylka kulul ee calaamadeynta iyo moodooyinka kala duwan ee mashiinnada la isku duro iyo kuwa lagu afuufo. Dhammaantood waxay gacan ka geysan doonaan alaab tayo sare leh waxayna si dhakhso leh ugu fidiyaan macaamiisheenna.
Waxaan bixinaa qalab casri ah oo casri ah oo loogu talagalay noocyada si ay u keenaan fikradaha cusub ee suuqa. Kooxdayada gudaha ee injineerada iyo naqshadeeyayaasha ayaa kaa caawin doona fikraddaada, shaqadaada, farshaxankaaga iyo qaabeyntaada. Hadafkeenu waa inaan kaa caawino inaad siiso wax soo saar shaqeynaya, hal abuur leh, oo aad u jecel macaamiishaada. Haddii aad rabto in baakadaada si sax ah loo dhammeeyo, la soco Shirkadda SICH ee Baako.
Jar kareemka la isku qurxiyo, Dhalada Madow Gel Polish, Weelasha Kariimka Qurxinta, Jar kareemka indhaha, Weelka Wax lagu qurxiyo ee Qurxinta leh oo Dhex Dhexaad ah, Baakadaha Qurxinta Qurxinta,